शाओमी मी नोट १०: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात Androidsis
शाओमी मी नोट १० आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ
शाओमी मी नोट १० अन्तत: स्पेनमा प्रस्तुत गरिएको छ, चिनियाँ ब्रान्डले केहि दिन अघि विज्ञापन गरेको रूपमा। एउटा मोडेल जुन उत्सुकताका साथ पर्खिरहेको थियो, किनकि यसले फोटोग्राफीको क्षेत्रमा एक प्रख्यात फोन हुने प्रतिज्ञा गर्दछ। कम्पनी हामीलाई एक साथ छोड्छ Xiaomi CC9 प्रो को अन्तर्राष्ट्रिय संस्करणयस हप्ता पनि प्रस्तुत गरियो।
हामी अगाडि उभिन्छौं एक फोन जुन यसको क्यामेराको लागि बाहिर खडा हुन्छ, पाँच रियर सेन्सरहरूको साथ, 108 MP मुख्य सेन्सर द्वारा कप्तान। त्यसैले यो Xiaomi Mi नोट 10 वर्तमान बजारमा अन्य धेरै मोडेलहरूको तुलनामा केहि पक्षहरूमा अगाडि छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ।
दुबै डिजाइन, पानीको एक ड्रपको आकारमा एक निशानको साथ यसको स्क्रिनको साथ केही पातलो फ्रेमहरूसहित, उनीहरूको विशिष्टीकरणहरू जस्तै तिनीहरू समान छन् जुन हामीले पहिले नै CC9 प्रोमा देख्यौं। हामी फर्मको प्रीमियम मिड-रेंज भित्र फोन पाउँछौं। डिजाइन हालको, धेरै फेसनशील छ, र एक स्क्रिन अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पहिले नै यस अवस्थामा प्रयोग भएको छ।
1 विशिष्टता Xiaomi Mi नोट 10
विशिष्टता Xiaomi Mi नोट 10
यो प्रयोगकर्ताहरूका लागि एकदम चाखलाग्दो फोनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। शाओमी मी नोट १० मात्र यसको महान क्यामेराको लागि बाहिर खडा छ, तर हामीलाई एक राम्रो ब्याट्री संग छोड्छयोसँग राम्रो प्रोसेसर छ र आजको उपभोक्ताहरूले यस बजार क्षेत्रमा के खोजिरहेका छन् भेट्छन्। त्यसैले यो विचार गर्न एक राम्रो विकल्प हो, जसले पैसाको लागि राम्रो मूल्यको प्रतिज्ञा गर्छ। यी फोनका पूर्ण विशिष्टताहरू हुन्:
प्रदर्शन: .6,47..1080 इन्च AMOLED x 2340० x २XNUMX० पिक्सेलको रिजोलुसनको साथ
रियर क्यामेरा: १० MP MP MP सामसु IS ISOCELL ब्राइट HMX मुख्य सेन्सर + २० MP चौडा कोण सेन्सर + १२ MP २x टेलिफोटो + MP MP telex टेलिफोटो + २ MP म्याक्रो सेन्सर
ब्याट्री: ,,२5.260० एमएएच 30० डब्ल्यू द्रुत चार्जको साथ
कनेक्टिविटी: डुअल सिम, G जी / एलटीई, वाइफाइ 4०२.११ ए / सी, जीपीएस, ग्लोनास, ब्लुटुथ, युएसबी-सी, mm. mm एमएम हेडफोन ज्याक, एफएम रेडियो
अन्य: स्क्रीन अन्तर्गत अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, NFC, इन्फ्रारेड emitter
आयाम: १ x x x x 157,8 x mm२ मिमी
तौल: १ 208 २ ग्राम
अपरेटिंग प्रणाली: MIUI9को साथ एन्ड्रोइड Pie पाई
फोन फर्कन्छ बजार मा पहिलो मा एक 108 MP सेन्सर छ, जो निस्सन्देह यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय तत्व मध्ये एक हो। चिनियाँ ब्रान्डले महत्वपूर्ण जोखिम लिएको छ, तर तिनीहरू प्रतिस्पर्धी भन्दा अघि छन् र यस मोडेलको शक्ति देखाउँछन्। यस सेन्सर मात्र होईन, किनभने शाओमी मी नोट १० का अन्य चार सेन्सरहरू पनि महत्वपूर्ण छन्। केहि सेन्सरहरू जुन योभन्दा पहिले नै प्रकट भएको थियो विस्तृत रूपमा प्रस्तुत। त्यसैले हामी यस सम्बन्धमा ठूला चीजहरूको आशा गर्न सक्छौं।
यस क्यामेरा मात्र यस मोडेलको एक प्रमुख तत्व हो। यस Xiaomi Mi नोट 10 मा पनि ब्याट्री एकदम राम्रो छ, ,,२,० mAh को क्षमताको साथ यसले हामीलाई ठूलो स्वायत्तता दिनेछ सबै समयमा। थप रूपमा, हामी यसमा 30० डब्ल्यूको द्रुत चार्ज पाउँछौं, जुन अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व हो। यो एन्ड्रोइड with को साथ आउँदछ, यद्यपि MIUI ११ प्रयोग गरिसकिएको छ। निश्चित रूपमा चाँडै नै यसको आधिकारिक रूपमा Android १० मा अपडेट हुनेछ, यद्यपि कुनै मितिहरू छैनन्।
यो फोन स्पेनमा आउन धेरै समय लिने छैन, कम्पनीले आफ्नो प्रस्तुतिमा पुष्टि गरिसकेको छ। नोभेम्बर १ of को रूपमा यो Xiaomi Mi नोट 10 स्पेन मा किन्न सम्भव छ। यो र्याम र भण्डारणको एक संस्करणमा सुरू हुन्छ, जसको घोषणामा देखिन्छ। फोन सामान्य स्टोरहरूमा उपलब्ध हुनेछ जहाँ चिनियाँ ब्रान्डको फोनहरू छन्।
मूल्य रुचि र श generated्का उत्पन्न गर्ने पक्ष थियो। यस अवस्थामा, शाओमी मी नोट १० एक महँगो मोडेल हो जुन ब्रान्डले हामीलाई छोड्दछ, 549 XNUMXeयूरो को मूल्य संग। निस्सन्देह, यसमा प्रयोग गरिएको नवीनता, विशेष गरी क्यामेराको क्षेत्रमा, यस्तो चीज हो जसका लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ र सामान्य भन्दा बढि मूल्यलाई बुझाउँदछ। स्पेनमा यस मोडेलको सुरुवातको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » शाओमी मी नोट १० आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ
सपना साकार हुन्छ: शाओमी स्मार्ट टिभीहरू स्पेन आइपुग्छन्
Huawei Nova6पूर्ण रूपमा यसको सबै विशिष्टीकरण र मूल्यहरु संग लीक भएको छ